Pascal Lite စျေး - အွန်လိုင်း PASL ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Pascal Lite (PASL)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Pascal Lite (PASL) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Pascal Lite ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $62 192.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Pascal Lite တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Pascal Lite များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Pascal LitePASL သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0204Pascal LitePASL သို့ ယူရိုEUR€0.0174Pascal LitePASL သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0157Pascal LitePASL သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0187Pascal LitePASL သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.185Pascal LitePASL သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.129Pascal LitePASL သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.457Pascal LitePASL သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0766Pascal LitePASL သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0273Pascal LitePASL သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0285Pascal LitePASL သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.459Pascal LitePASL သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.158Pascal LitePASL သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.111Pascal LitePASL သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.53Pascal LitePASL သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.3.43Pascal LitePASL သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.028Pascal LitePASL သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.031Pascal LitePASL သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.638Pascal LitePASL သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.142Pascal LitePASL သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥2.16Pascal LitePASL သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩24.29Pascal LitePASL သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦7.74Pascal LitePASL သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.51Pascal LitePASL သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.565
Pascal LitePASL သို့ BitcoinBTC0.000002 Pascal LitePASL သို့ EthereumETH0.00005 Pascal LitePASL သို့ LitecoinLTC0.000361 Pascal LitePASL သို့ DigitalCashDASH0.000215 Pascal LitePASL သို့ MoneroXMR0.000222 Pascal LitePASL သို့ NxtNXT1.48 Pascal LitePASL သို့ Ethereum ClassicETC0.003 Pascal LitePASL သို့ DogecoinDOGE5.9 Pascal LitePASL သို့ ZCashZEC0.000224 Pascal LitePASL သို့ BitsharesBTS0.801 Pascal LitePASL သို့ DigiByteDGB0.764 Pascal LitePASL သို့ RippleXRP0.0711 Pascal LitePASL သို့ BitcoinDarkBTCD0.000705 Pascal LitePASL သို့ PeerCoinPPC0.0688 Pascal LitePASL သို့ CraigsCoinCRAIG9.32 Pascal LitePASL သို့ BitstakeXBS0.872 Pascal LitePASL သို့ PayCoinXPY0.357 Pascal LitePASL သို့ ProsperCoinPRC2.57 Pascal LitePASL သို့ YbCoinYBC0.00001 Pascal LitePASL သို့ DarkKushDANK6.56 Pascal LitePASL သို့ GiveCoinGIVE44.26 Pascal LitePASL သို့ KoboCoinKOBO4.83 Pascal LitePASL သို့ DarkTokenDT0.0188 Pascal LitePASL သို့ CETUS CoinCETI59